Ev Kuchaja Module, Ev Dc Yekuchaja Module, Ev Charger Module - UUGreenPower
IP65 Yakakwirira Inodzivirira yekuchaja module
Iyo IP65 yakadzivirirwa inodzivirira yekuchaja module inotora yazvino magetsi magetsi tekinoroji uye kupisa kupisa tekinoroji, uye yakanyatsogadzirirwa iyo yekunze yepamusoro-simba inokurumidza kurodha murwi wemota dzemagetsi. Iyo yekuchengetedzwa kwenzvimbo inosvika IP65, iyo inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana nharaunda dzakadai seguruva, munyu mhute uye condensation.
UBC 75010 bidirectional V2G kuchaja murwi unoshandiswa zvakanyanya mukuchaja uye simba rezvemagetsi pakati pemagetsi ekufambisa emagetsi uye magetsi grid .Its kukosha kwayo kwekushandisa iri mukugutsa kubhadharisa kwemazuva ese emagetsi ekufambisa emagetsi, uye kutamba zvine mutsindo basa remagetsi mota bhatiri rekuchengetedza simba unit, ichiziva kurongedza zvine mutsindo gridhi remagetsi, simba kudiwa padivi manejimendi, kukosha kwakabatana kweiyo micro grid uye simba Internet
UR100040-SW EV kuchaja module yakanyanya kugadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo ine yakafara voltage huwandu hwesingaperi simba kuburitsa. Zvakare ine yakasimba simba chinhu, yakanyanya kushanda, yakakwira simba kuomarara, yakavimbika kuvimbika, kungwara kutonga uye wakanaka chitarisiko mukana. Hot pluggable uye akangwara edhijitari ekudzora matekinoroji anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.
UR100030-SW EV kuchaja module yakanyatsogadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo ine yakafara voltage huwandu hwesingaperi simba kuburitsa. Zvakare ine yakasimba simba chinhu, yakanyanya kushanda, yakakwira simba kuomarara, yakavimbika kuvimbika, kungwara kutonga uye wakanaka chitarisiko mukana. Hot pluggable uye akangwara edhijitari ekudzora matekinoroji anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.
UR100020-SW EV kuchaja module yakanyanya kugadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo ine yakafara voltage huwandu hwesingaperi simba kuburitsa. Zvakare ine yakasimba simba chinhu, yakanyanya kushanda, yakakwira simba kuomarara, yakavimbika kuvimbika, kungwara kutonga uye wakanaka chitarisiko mukana. Hot pluggable uye akangwara edhijitari ekudzora matekinoroji anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.
Iyo umev04 yekuchaja murwi kuongorora module yakashongedzwa neLCD inobata color skrini uye ine yakasarudzika yemunhu-komputa yekudyidzana interface. Iyo yakanyatsogadzirirwa iyo yeEuropean standard uye yeJapan mwero yekuchaja murwi weMagetsi mota. Inotsigira CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, nezvimwe.
Isu tinotenda kuti zvisikwa ndicho choga chombo chine simba chekuwana yakanaka mhando maitiro.
Uye isu tichashandisa zvisikwa panguva yese zvigadzirwa kugadzira basa.
Nyanzvi R & D timu
Akazvipira kuve mutengesi akanakisa ezvinoumba zvinhu zve super chiteshi chiteshi.
Anenge makore makumi maviri emakore ekuziva ruzivo
Iko kuunganidzwa kweDC simba tekinoroji mumakumi maviri emakore apfuura yakaisa hwaro hwakasimba hwebudiriro yazvino.
Yepamberi hunyanzvi dhizaini
Isu tinopfuurira mukusika dhizaini uye edza kugadzira super yekuchaja module nhepfenyuro yezvikuru kuchaja zviteshi.
Yakanaka sevhisi sevhisi
Isu hatisi kungopa chete inofungidzirwa pre-sale sevhisi, asi zvakare mhando yepamusoro yeashure-yekutengesa sevhisi.
● IP65 yakakwirira yekudzivirira cha ...
● Bidirectional Transf ...
Ultra yakakwira kushanda zvakanaka: iyo ...
● Ultra kunyatsoshanda: t ...
Chinhu UMEV04 DC Mune ...
Tarisa pane emagetsi emagetsi hunyanzvi, gadzirisa dambudziko bhodhoro renongedzo.
Shenzhen UUGreenPower Electric Co, Ltd, yakavambwa muna2015, yakazvipira kuve mutengesi akanakisa ezvinoumba zvikamu zvezvinhu zvepamusoro zvekuchaja. Iyo kambani ine nyanzvi yemagetsi emagetsi R & D timu, angangoita makore makumi maviri eDDC emagetsi tekinoroji kuunganidza, kuburikidza nehunyanzvi dhizaini, kugadzira akateedzana e40kW, 30KW, 20KW, 15KW super kuchaja ma module emahara ekuchaja zviteshi.
Shenzhen UUGreenPower inonamatira kune vatengi-yakatarisana, yehunyanzvi maonero, ichitarisa pasimba remagetsi tekinoroji hunyanzvi, kugadzirisa vatengi 'bottleneck poindi, kukura nevatengi, uye pamwe chete kusimudzira iyo girini simba uye yakaderera-kabhoni hupfumi yemagetsi mota indasitiri.
Gunyana / 11/2020
UUGreenPower Inoburitsa Ina Supercharging Mhinduro! Core muromo: musi August 26, rechi14 Shanghai International kuchaja zvivako indasitiri inoratidzirwa rakaitirwa Shanghai New International Expo Center. Mune kuratidzwa uku, akati wandei epamba uye ekunze nyeredzi emakambani
Kubhadharisa Mubatanidzwa: 4,173 nyowani yeruzhinji yekuchaja mirwi yakawedzerwa muna Chivabvu, yakakwira 59.5% gore-ne-gore
Chikunguru / 20/2020
Musi waChikumi 11, iyo data yakaburitswa neChina Charge Union zvakaratidza zviri pamutemo kuti kusvika muna Chivabvu 2018, nhengo dzemubatanidzwa dzakarondedzera huwandu hwe266 231 yeruzhinji yekuchaja mirwi, uye kuburikidza nenhengo dzemubatanidzwa, makomba emota akatorwa ne441,422 zvidimbu zvemashoko eruzivo. A t ...
NDANEV: Kuongororwa kwehuwandu hwekuwana data yemagetsi matsva nyika
Musi waJune 30, 2018, webhusaiti yepamutemo yeNational Big Data Alliance (NDANEV) yeNew Energy Vehicles yakaburitsa manhamba uye kuongororwa kweruzivo rwehuwandu hwehuwandu hwezvinhu zvitsva muna Chivabvu. Kubva pane iyo data yekupfupikisa, bepa iri rinoongorora zvine hungwaru hwekupinda chinzvimbo ...
Chikamu cheVolkswagen Group chakagadzira nekuburitsa chiteshi chengarava chemotokari dzemagetsi, scooter emagetsi uye mabhasikoro emagetsi, anonzi Volkswagenpassat nharembozha yekuchaja. Kuchengeta makore makumi masere, Volkswagen ichaisa zviteshi gumi nembiri zvekuchaja nhare muWo ...
Musi waChikunguru 9, iyo Nanjing Municipal Mutengo Bureau yakaburitsa iyo "ziviso yekugadzirisa iyo Maitiro Ekuchaja Ekuchaja uye Kutsiva kweMotokari Dzemagetsi Dzakachena". Chiziviso chakanyatsotaura kuti yakagadziridzwa yakachena magetsi bhazi (12m) kuchaja uye kutsiva yepamusoro-soro kuchaja chiyero chese ...